Magneto weputara uzo ohuru nke igwe eletriki ya | Akụkọ akụrụngwa
Magneto weputara uzo ohuru nke ogologo eletriki ya
N'ọtụtụ oge, anyị ekwuola banyere ogologo igwe eletriki eletrik dị na ahịa ugbu a ma ọ bụ eziokwu na ebumnuche ndị a abụghị maka ndị niile na-ege ntị n'agbanyeghị ole egwuregwu ụmụaka yiri. N'oge a ụlọ ọrụ Magneto eweputala ụdị nke abụọ nke ogologo eletriki ya na ihe ka mma
Ọ bụ ụgbọ eletrik na-agagharị n'obodo ahụ na ụzọ na-adigide yana ihe ọchị, mana kpachara anya, n'ihi na bọọdụ ndị a na-eru oke ọsọ ma na-akwụsị ha ozugbo anaghị adị mfe ma ọ bụrụ na anyị ejighị ha mee ihe. Otu n’ime ndị mere ka ndị mmadụ na-ejikwa bọọdụ eletrik ndị a akpọrọ aha ha bụ Casey Neistat, bụ́ onye a ma ama, ma ọ na-eji akara a na-agaghị enwetali akpa niile.
Mgbanwe na Magneto ọhụrụ
Oge a Magneto ohuru na etolite n’ụzọ niile, mana karịa ike niile. Anyị chọpụtara na a na-etinye motọ ahụ na wiil ndị ahụ, ee ee, Anyị ekwuola injinia n'ihi na ọ na-adọba abụọ karịa otu. N'okwu a ọ bụ 350W Dual Hub nke na-enye ya ọsọ ọsọ nke 28 MPH (dabere na ịdị arọ nke onye na-eji ya) nke ruru ihe dị ka 45 km / h.
Tụkwasị na nke ahụ, imewe agbanweela ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga ma ugbu a, ogologo oge ahụ nwere ọdịdị dị iche n'agbanyeghị na ejiri ya mee osisi Canada na ndụ batrị dị ihe dịka kilomita iri abụọ na ise dabere na onye na teren site na-emecha a ụgwọ zuru ezu na awa 2-3 ma nwee ike gbanwee onye ọrụ ahụ n'ụzọ dị mfe.
Ntọala ahụ ruru ihe dịka 7 Kg, nke na-agbanweghi banyere nsụgharị gara aga, mana ọ bụrụ enwe ike ịga n'ihu na azụ site na ịchịkwa ogologo osisi. Ejikọtara ebe dị anya site na Bluetooth 2.4 ma nwee ike iji microUSB USB na-ebugharị na anyị ga-achọ nkwụnye maka eriri ahụ dịka ọ na-abịa na ụdị UK.
Nkọwa ndị ọzọ dị mma n'akụkụ niile ka anyị hapụ gị ha:
Jikwaa 920MM * 240MM * 13MM
Wheels 90 * 52MM, 85A High Rebound Polyurethane
Wheel size 83mm dayameta / 52mm obosara
Batrị Samsung High Lithium batrị
36V, 4.4AH 20PCS sel batrị
Na Ebe nrụọrụ weebụ Magneto anyị ga-ahapụ ebe a ị ga-achọta ozi niile na ịzụta nhọrọ nke nnukwu ụgbọ eletrik a nke nwere ọnụahịa nke 590 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Magneto weputara uzo ohuru nke ogologo eletriki ya
Etu esi ebudata ọdịnaya na Netflix iji lelee ha n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla
Gooligan bụ malware ọhụrụ na - emetụta ọtụtụ nde ndị ọrụ gam akporo